Yakagadziriswa: Kununura pane Yekuita Yekuvimbiswa | Martech Zone
Chivimbiso chekuita munhu chakundikana. Kwemakore isu tanga tichinzwa nezve mabhenefiti ayo asingatendeseki, uye vashambadziri vari kutsvaga kuisa mari pazviri vakatenga mhinduro dzinodhura uye nehunyanzvi, kungoziva kuti zvakanonoka izvo, kune vazhinji, chivimbiso chekuita munhu chinopfuura utsi nemirazi.
Dambudziko rinotanga nekuti maitiro akaonekwa sei. Yakagadzwa semhinduro yebhizinesi, yakave yakagadzirirwa kuburikidza neiyo lens yekugadzirisa zvido zvebhizinesi apo kunyatsoita munhu kunofanirwa kunge kuri nezvemunhu (kana izvozvo zvichinzwika zviri pachena, imhaka yekuti iri). Kuisa zita remumwe munhu muemail hakushandise zvavanoda. Kuvatevera vachitenderera neinternet neshambadziro yechinhu chavakatarisa pane yako saiti hakuite zvido zvavo. Kugadziridza peji rako rekumhara zvirimo Aizoita kushandira zvavanoda, asi kwete kana iyo sisitimu inoitsigira iine maburi epa data uye kusarongeka kwemukati manejimendi, nyaya dzakajairika dzinotungamira dzakawanda dzehunhu hwevanhu dzinokanganisa mabhizinesi kugumburwa.
Imwe yeaya maitiro akafanana neyekushambadzira kwedhijitari yakaenzana neyakajairika imba yekunyepedzera, uye vatengi vako havangoone kuburikidza navo chete, vanovagumbukira. Asi kune nyika umo data-ruzivo, zvakagadziriswa zviitiko zvinopa kukosha kwechokwadi kune vatengi, kuvabatsira kuwana, kutsvagisa, uye kutenga zvinhu zvavo zviri nyore mumikana inoenderana navo zvakanyanya.
Kazhinji kazhinji, mhando dzinobata nehurongwa hwekuita zvisati zvaitika kuti vagone kubudirira. Kurota kunopenya kwemabhasiketi akakura uye kudzokorora vatengi kunosiya chokwadi chakashata: pasina nzira yakasimba yedata uye dhizaini yedhijitari iyo inogona kutsigira yakadzvanywa omnichannel zviitiko, zviroto ndizvo zvazvichava. Asi hazvifanirwe kunge zviri seizvi. Kuita munhu kunogona kubudirira.
Saka tingaite sei kuti tifambe kubva pane chiitiko chinosiya vatengi vachinzwa kusava nehanya (pazvakanakira) kuenda kune chinovabatanidza nezvavanoda nguva uye sei ivo vanozvida? Nekodzero yekubatanidza tekinoroji uye zano.
Ita Yako Dhata Kushanda
Kutanga uye pamberi pezvese, mabhizinesi anoda kuti data ravo rirongedzwe. Ziva kuti handina kutaura vatengesi vanoda kuti yavo data irongedzwe asi mabhizinesi azere. Vazhinji vatengesi vane yakachena uye yakarongeka data. Izvi zvakafananawo kune vanogadzira zvigadzirwa, zvikwata zvekumaka, uye chikamu chimwe nechimwe chesangano rine mukana waro wedhaidhi.
Chiitiko chevatengi chete hachigare mune zvakatsvinda uye zvakarongedzwa madiki silos; zvinoitika pamatanho ese uye panguva dzose. Kutarisira ruzivo nezve kudzokororazve mishandirapamwe yekuzivisa zvizere zvevatengi chiitiko mutambo webenzi. Kuti munhu ashandise, zvinoda kuvakwa zvakakomberedza chiitiko chese, kwete chidimbu chimwe chete zvacho.
Izvi zvinoreva kuti bhizinesi rako rinofanirwa kuwana maonero emumwe mutengi pamatanho ese ekubata. Vatengi Dhata Mapuratifomu (CDPs) zvakanaka kune izvi, uye mudiwa akavimbika saiye Myplanet inogona kukubatsira kuona kuti ndeipi CDP inokodzera zvakanyanya pane zvaunoda uye nekukubatsira kuti uzviite. Nokutyora dhipatimendi rako dhata silos, iwe unozotanga kuwana yakazara maonero ezvinotaridzika nevatengi vako, kubva kumagumo kusvika kumagumo. Kuita munhu nhasi kunotengesa mumatare evatengi nyaya nguva zhinji, asi chokwadi hachiwanzo kuve chakananga.
Iwe zvakare unozoda kumisikidza yako chaiyo-nguva data (RTD) zvinoshandiswa. Uine RTD, iwe uchave nechokwadi chekuti ruzivo rwacho rwakagadziridzwa-kuvimbisa ruzivo rwechigadzirwa rwuri padanho uye mabasa ekutsvaga ari kuita kugona kwavo - asi chikamu chakakosha kuvaka nzira inoshanda yekuita munhu pasi pemutsara. Zviito zvevatengi mune imwe chiteshi vanofanirwa kukonzeresa maratidziro echiratidzo mune chero chiteshi, kusanganisira iyo yavakange vari, uye zvinongogoneka neRTD.
Kuunza mune yekuwedzera indasitiri data kunogona kukubatsira iwe kutora zviitiko nhanho yekuwedzera, futi. Kushambadzira zvimiro zvakapoterera mazwi ekutsvaga zvinogona kubatsira kwete chete kuti ndeapi mazwi akajairika vatengi vako vari kushandisa kuwana zvigadzirwa zvaunoda asiwo mazwi ekuwedzera avanobatana nawo nezvigadzirwa, izvo zvinouya zvinobatsira kana iwe wagadzirira kugadzirisa chiitiko neruzivo rwechigadzirwa. .
Uye pakupedzisira, zvakakosha kuti uise pakati chigadzirwa chako data. Kuona chiitiko icho mutengi ane online chinowirirana nechavaizove nacho muchitoro, paapp, uchishandisa yakazvimirira kiosk, kutaura neA Alexa, kana chero imwe fomu yechiratidzo chako chingave chiri kutaurirana nevateereri vako pane, unofanirwa kuva nazvo yega yeaya mabhatani akabatana kune yepakati dhata hub. Zvekare, pasi pemutsara kana wagadzirira kuronga rwendo rwevatengi rwakasarudzika, data rakawiriraniswa richava musana wezviitiko izvi.
Gadzira Izvo Modular
Kuburitsa dhata zvine mutsindo kunobatsira kuti ruzivo ruve rwakakura, asi kuti dhata rishande pane rakanyanya kunaka uye uve nechokwadi chekuti uri kuendesa chiitiko chekugogodza mune chiteshi chese, unofanirwa kufunga nezvekudzikisa ruzivo rwako. Iyo isina musoro dhizaini (yekudzora yako yekumberi-kumagumo chiitiko kubva kumashure-kumagumo fomati) haisi yemunhu wese, asi kune mazhinji modular fomati ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo yekuenderana nemutengo weiyo tekinoroji shanduko.
Pasina yakanakisa-ye-mhando tekinoroji inogonesa chikamu chimwe nechimwe chechiitiko, zvinogona kuve zvakaoma kutora icho chiitiko kune inotevera nhanho neorchestration. Kupedzisa rwendo rwevatengi kubva mukutaurirana kwekutaurirana kwakavaunza kune chako chiratidzo, kune ruzivo rwepamhepo uko kwavanodzidza zvakawanda nezve zvigadzirwa zvako, uye pakupedzisira kune ye-mu-kutenga kutenga kwakanyanya kuomarara kuita kana iwe uri kushanda ne monolithic kumashure -end izvo zvisingatambe zvakanaka nevamwe.
Inogadzirwa neMyplanet inopa modular fomati iyo inokutendera iwe kuti unyatso kushandisa ako ecommerce zviitiko. Kuburitsa yakaratidza ecommerce mapatani uye akanakisa-mukirasi matekinoroji, Anogadzikana anokushongedza iwe nematurusi ekugadzira yechokwadi omnichannel mhinduro iyo inogona kurarama zvinoenderana nevimbiso yekushandurwa: zvakazara zvakabatana data kukubatsira iwe kuona izvo zvirimo izvo vatengi vako zvavanoda; inoshanduka zvemukati manejimendi kuti zvikwanise iwe kuendesa izvo zvemukati kune akakodzera vateereri zvikamu; uye yakavakirwa modular hwaro hwekukura nebhizinesi rako, uchichinjira kumisika mitsva mikana sezvavanobuda.
Monoliths ane nzvimbo yavo, uye kana zvipiriso zvavo zvikaitika kuti zvinyatsoenderana nezvido zvako zvakakwana, unenge wakakura. Asi sekushanduka kwenzvimbo, zvakaoma kwazvo kuti uone kuti mhinduro yemonolithic ichaenderera sei kupa zvese maricho zvinoda kubudirira, uye nekuzvipa padanho repamusoro rinowanikwa mumusika. Iko kugona kusarudza uye kusarudza mhinduro dzinouya neyakaenzana modular zvinoreva kana chimwe chinhu chikachinja chebhizimusi rako - fomu nyowani chinhu chaunoda kuwana, chiteshi chitsva chaunoda kuve chikamu che - tekinoroji inotsigira bhizinesi rako inogona kuchinja zvinoenderana.
Tarisa uone kusimuka kwemisika mumakore apfuura 2-3 makore. Misika yemisika inogona kupa chaiyo kukosha-kuwedzera kune vatengi. Vatengi vanogona kuwana zvese zvavanoda munzvimbo imwechete uye, sebhonasi yakawedzerwa, vanogona kuwana poindi dzekuvimbika kana kuchengetedza pamutengo wekutumira panguva imwe chete. Uyezve, ivo vanovhura mikana yezvinhu senge zvinowirirana zvigadzirwa zvinokurudzirwa zvinogona kusimudzira ruzivo rwechigadzirwa kana kuwedzera kurerutsa ruzivo rwavo rwekutenga, zvese zvichipa zvakanyanya kukosha kukosha kwevatengi. Bhizinesi rekubatsira kweiyi tekinoroji yakadzika midzi mubatsiro revatengi uye inobatana yakanangana neinobudirira kuita maitiro - pane chikonzero misika yabvisa munguva pfupi yapfuura.
Asi kuyedza kuunza mhinduro yemusika munzvimbo yepuratifomu yagara iripo zvinogona kunetsa. Chero hunyanzvi hutsva hunotora basa kuti hugadzirise, asi kuunza tekinoroji nyowani mune iripo monolithic ecosystem inogona kuve padyo neisingakwanise. Mhinduro yega yega ine basa uye nguva nemari zvinobatanidzwa. Iko kuchinjika kwema modular, akanakisa-e-kuberekana nzira inopa, zvisinei, zvinoreva kuti nguva yese iyoyo uye basa nemari hazvizorasika pasi kana iwe uchifanira kugadzirisa kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Kuita kwako munhu hakuna kurarama kusvika pahupombwe kusvika ikozvino, asi kunogona. Isu tinongoda kuve nehungwaru nezve mashandisiro atinoita tekinoroji inoigonesa. Isu tinofanirwa kuseta hwaro hwakasimba hwekushandisa dhata nekuti inosimbisa zvese zveunhu, uye isu tinofanirwa kuona zvivakwa zvatinovimba nazvo kutsigira maitiro ehunyanzvi anogona kunyatso tsigira. Kunyanya kukosha, isu tinofanirwa kutarisisa pamazano-anoenderana nevashandisi. Chero ipi nzira yemunhu inoisa bhizinesi pamberi pezvinodiwa nevashandisi yakagadzirira kukanganisika uye kutadza.
Kumbira Demo Rinoenderana
Tags: cdpcomposableMutengi Dhata Platformecommerceecommerce kuita zvemunhumyplanetomnichannelPersonalizationzano remunhuchaiyo-nguva dataYechokwadi-nguva yekuita munhurtd